"Ikhaya Leholide lika-Stefan" A/C Kwisicelo. - I-Airbnb
"Ikhaya Leholide lika-Stefan" A/C Kwisicelo.
Ikhaya lethu lingakunceda uphole uze uzihlaziye ngoxa ukonwabela iCoimbatore. Izolile, yabucala kwaye inazo zonke izinto ezifunekayo, Unokungena ngokupheleleyo kwiholo nakwiindawo zasekhitshini.'Ikhaya lakho elikude nekhaya' liphakathi eCoimbatore kwaye lipholile kakhulu. (A/C Iindleko ezongezelelweyo @ Rswagen/ngosuku).
Sisekwindawo esembindini kwaye sinelitye eliphosakeleyo kuyo yonke indawo yoshishino kunye nezokhenketho. Umgama wokuhamba ukuya kwisibhedlele i-Ganga. Imizuzu eyi-5 yokuhamba ngemoto ukuya kwi-Mall kwaye iphakathi esixekweni.
Ikhaya elitofotofo lokukunceda uphumle emva kosuku oludinisayo. ukufikelela lula kwisikhululo sikaloliwe / kudederhu lweevenkile. I-Ooty yiyure nje ye-2 yokuqhuba kunye neendawo ezininzi zomdla macala onke. Sisoloko sikhona ukukukhokela xa ufuna naluphi na uncedo.
Indawo ezolileyo enemithi enomthunzi macala onke, ilungele ukuhamba ekuseni okanye ngokuhlwa. Iindawo zokutyela kunye neepaki zingumgama wokuhamba.
Iyafumaneka nanini na ngefowuni okanye ngomyalezo.